FAQ Archives - soo saaraha mashiinka kululaynta | xalalka kululaynta induction
Waa maxay geedi socodka dusha daaweynta daaweynta kuleylka? Kuleylka kuleylintu waa geedi socod daaweyn kuleyl ah oo u oggolaanaya kuleylka aadka loo bartilmaameedsado ee biraha adoo adeegsanaya elektromagnetic induction. Nidaamku wuxuu ku tiirsan yahay mawjadaha korantada ee curyaanka ah ee ku jira maaddada si loo soo saaro kuleylka waana habka ugu doorbidsan ee loo adeegsado isku xirnaanta, adkeynta ama jilicinta biraha ama qalabka kale ee wax lagu tababaro. Casriga… Akhri wax dheeraad ah
Categories FAQ, Technologies Tags daaweynta kuleylka, kululaynta kuleylka, adeegga kuleylka, daaweynta kuleylka, daaweynta kululaynta, Daaweynta kuleylka HF, daaweynta kuleylka soo noqnoqda badan, daaweynta kuleylka soo noqnoqda badan, daaweynta kuleylka induction, habka daaweynta kuleylka kuleylka, daaweynta kuleylka dusha sare, daaweynta kululaynta dusha sare
Induction Adkeynta Indha-indheynta Codsadaha Maxay tahay adkaanshaha indha-indheynta Adkaynta indha-indhayntu waa nooc ka mid ah daaweynta kuleylka taas oo qayb bir ah oo leh kaarboon ku filan ay kuleylka ku jirto goobta soo-gelinta ka dibna si dhakhso leh u qaboojiso. Tani waxay kordhisaa adkaanta iyo jajabka qaybta. Kuleylka kuleylka ayaa kuu oggolaanaya inaad haysatid kuleyl ku habboon a Akhri wax dheeraad ah
Categories FAQ, Technologies Tags iibso mishiinka qallajinta indha-indheynta, adkeyn, induction adkaanta, dusha adag, geedi socodka adkaanta, kululaynta kululaynta, Mashiinka adag ee induction, Qiimaha mashiinka adkeeya, Qiimaha adkaanta indha-indheynta, geeddi-socodka adkeynta, Dusha sare ee ku-adkaynta Induction, nidaamka adkaanta adkeynta, waa maxay qallajinta induction
Waxyaabaha loo yaqaan 'Brazing Basements' ee loogu talagalay muraayada isku dhafka ah, lacagta, saliidda, birta iyo birta, iyo wax kale.
Induction Brazing waxay isticmaashaa kuleylka iyo biraha wax lagu buuxiyo si ay ugu biiraan biraha. Markaad dhalaasho, buuxiyuhu wuxuu u dhexeeyaa inta udhaxeysa biraha aasaasiga ah (qaybaha la isku darayo) ficil ficil ah. Fiilaha la shubay ayaa la falgalaya lakabka khafiifka ah ee birta salka si uu u sameeyo isku xirnaan xoog leh oo daadinaysa. Meelo kala duwan oo kuleyl ah ayaa loo isticmaali karaa kala-kicinta: kuleyliyaha iyo kuleyliyaha iska caabinta, foornooyinka, foornooyinka, shucladaha, iwm. Waxaa jira saddex habab oo caadi ah oo lagu kala geddisan yahay: kaabballaarta, qaansaarka iyo wax-sameynta. Indha-indheynta indha-indheynta ayaa ka walwalsan kaliya kan ugu horreeya kuwaan. Lahaanshaha farqiga saxda ah ee u dhexeeya biraha aasaasiga ah ayaa muhiim ah. Farqiga u weyn ayaa yareyn kara xoogga kala-baxa wuxuuna u horseedi karaa kala-goysyada daciifka ah iyo daaqa. Ballaarinta kuleylka waxay ka dhigan tahay in farqiga u baahan in loo xisaabiyo biraha birlabinta, ma ahan qolka, heerkulka Kala dheereynta ugu fiican waa caadi ahaan 0.05 mm - 0.1 mm. Kahor intaadan fadeexeyn Brazing dhib malahan. Laakiin su'aalaha qaarkood waa in la baaro - oo laga jawaabo - si loo xaqiijiyo ka mid noqoshada guuleysiga, kharashka badan leh. Tusaale ahaan: Sidee ayey ugu habboon yihiin biraha aasaasiga ah ee brazing; waa maxay qaabka ugu fiican ee gariiradda loogu talagalay waqti cayiman iyo baahiyo tayo leh; indha sarcaadintu ma inay ahaato mid gacanta lagu qaato ama mid otomaatig ah?
Marka la joogo 'DAWEI Induction' waxaan ka jawaabeynaa kuwan iyo qodobbada kale ee muhiimka ah ka hor intaanan soo jeedin xalka xallinta. Diirada saarida qulqulka biraha saldhigga waa in sida caadiga ah lagu daboolaa dareeraha loo yaqaan qulqulka ka hor intaysan baasan. Flux wuxuu nadiifiyaa biraha aasaasiga ah, wuxuu ka hortagaa oksaydh cusub, wuxuuna qoyaa aagga qaboojinta ka hor intaan la tirin. Waa muhiim in la codsado qulqulka ku filan; aad u yar oo qulqulka ayaa noqon kara
ka dheregsan tahay oksaydh isla markaana lumisa awoodda ay u leedahay inay ilaaliso biraha aasaasiga ah. Flux marwalba looma baahna. Buuxinta fosfooriska
waxaa loo isticmaali karaa in lagu xannibo aaladaha naxaasta ah, naxaasta iyo naxaasta. Xannibaadda aan dheecaan lahayn ayaa sidoo kale suuragal ku ah jawi firfircoon iyo faakuum, laakiin indha sarcaadka waa in lagu sameeyaa qolka jawiga la kontaroolo. Dheecaanku waa in sida caadiga ah laga saaraa qaybta mar haddii biraha birta ay adkaato. Qaabab kala duwan oo looga saaro ayaa loo isticmaalaa, tan ugu caansan waa biyo daminta, soo qaadista iyo cadayashada siligga.
Categories FAQ Tags Xilliga Sare, Kala soocinta indhaha, Astaamaha Hoos-u-Qaadista, kululeeyaha daba-galka, mabda'a ah ciriiriga induction, aragtida bur burinta
Maxaad u dooratid Induction Induction?
Tikniyoolajiyadda kuleylka ee kuleylintu waxay si isdaba joog ah u kala wareejineysaa ololka furan iyo foornooyinka sida isha kuleylka ee doorbididda. Toddobo sababood oo muhiim ah ayaa sharraxaya caan-baxa sii kordhaya:
1. Xalka xawaaraha
Kuleylka kuleyliyaha wuxuu u wareejiyaa tamar ka badan milimitir laba jibbaaran ololka furan. Si fudud u soo dhig, induction wuxuu xajin karaa qaybo badan saacaddii marka loo eego hababka kale.
2. Kordhin deg deg ah
Soo-saariddu waxay ku habboon tahay is-dhexgalka qadka. Qaybo ka mid ah qaybaha mar dambe looma baahna in dhinac la iska dhigo ama loo diro xannibaadda. Kontaroolada elektarooniga ah iyo gariiradda loo habeeyay ha noogu dhexgalaan geeddi-socodka indha sarcaadka geedi socodka wax soo saarka aan xadka lahayn.
3. Waxqabadka habboon
Kuleylka kuleylka waa la xakameyn karaa oo lagu celin karaa. Ku qor xuduudahaaga habka aad rabto qalabka soo-gelinta, waxayna ku celin doontaa wareegyada kuleylka iyada oo la weecin karo oo keliya.
4. Xakameyn aan caadi ahayn
Induction-ka ayaa u oggolaanaysa hawlwadeennada inay arkaan hannaanka geedi socodka, oo ah wax ku adag ololka. Tani iyo kuleylka saxda ah waxay yareynayaan halista kuleylka, taas oo keenta kala-goysyada daciifka ah.
5. Deegaan badan oo waxtar leh
Ololka furan waxay abuuraan jawi shaqo oo aan raaxo lahayn. Akhlaaqda hawlwadeenka iyo waxsoosaarka ayaa natiijada ka dhasha. Soo-saariddu waa aamusan tahay. Mana jiraan wax kordhay oo heer kulka deegaanka ah.
6. Goobtaada si aad u shaqeyso
DAWEI Qalabka indha-indheynta indha-indheynta ayaa leh raad yar. Saldhigyada wax-qabadka waxay si fudud ugu kala baxaan unugyada wax soo saarka iyo qaababka jira. Iyo nidaamyadeenna is haysta, ee moobiilku waxay kuu oggolaanayaan inaad ka shaqeysid qaybo adag oo marin-u-hel ah.
7. Nidaam la'aan la'aanta
Induction waxay soo saartaa kuleylka gudaha biraha aasaasiga ah - iyo meel kale. Waa nidaam aan lala xiriirin karin; biraha salka ah waligood lama taabtaan ololka. Tani waxay ka ilaalisaa biraha aasaasiga ah inay ka soo baxaan, taas oo iyaduna kordhisa waxsoosaarka iyo tayada wax soo saarka.
Categories FAQ Tags Faa'iidada ciriiriga, induction brazing, xawaaraha sare ee soo noqnoqashada, Kala soocinta indhaha, Dheecaan ka qaadista RF, Sababtoo ah saboolnimadu way ka fiican tahay, Maxaad u dooratid Induction Induction?
Waa maxay daminta induction?
Nidaamkani wuxuu kululaa biraha horay u soo maray hawlgal muhiim ah. Diidmada qabatinka waxay yaraynaysaa adkaanta, waxay hagaajinaysaa marinka caloosha waxayna yareyneysaa walaaca gudaha. Nuuxnuuxsiga jirka oo buuxa waa geedi socod meesha shaqa dhameystiran lagu xannibo. Iyada oo ku darsamida tolida (oo si sax ah loogu yaqaanno isku hagaajinta tolida), kaliya aagga kuleylka uu saameeyay ee ay soo saartay habka alxanka ayaa lagu daaweeyaa.
Kala-soocista soo-saarista iyo u-habeynta waxay keenaysaa kuleyl dhakhso leh, la isku halleyn karo oo maxalli ah, xakameynta heerkulka saxda ah, iyo is-dhexgalka khadka tooska ah. Induction waxay ku daaweyneysaa shaqooyinka shaqsiyadeed qeexitaanka saxda ah, iyadoo nidaamyada xakamaynta si joogto ah loola socdo loona diiwaangaliyo geedi socodka oo dhan.
Xakamaynta qabatinka iyo caadiyeynta ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha tuubbada iyo dhuumaha. Waxay sidoo kale daaha ka qaaddaa silig, silsilado bir ah, garbaha mindi iyo tuubbada naxaasta ah. Xaqiiqdii, soo-saaristu waxay ku habboon tahay wax kasta oo hawl qabasho ah.
Qalab noocee ah ayaa la heli karaa?
Nidaam kasta oo DAWEI Induction annection waxaa loo dhisay si loo qanciyo shuruudaha gaarka ah. Nidaamka kasta xuduntiisu waa
DAWEI Soo-saare kuleyliyaha Kuleylka oo soo bandhigaya iswaafajin culeys otomaatig ah iyo isir joogto ah oo awood leh dhammaan heerarka awoodda. Inta badan nidaamyadeena la bixiyay sidoo kale waxay leeyihiin qaab maamul u dhisan iyo xalal xakameyn.
Categories FAQ Tags qabashada, xoojin joogta ah, sare u qaadista dusha sare, qabashada induction, tuubbada qaboojinta induction, Waa maxay daminta induction?
Waa maxay alxanka induction?
Iyada oo alxamida induction kuleylka ayaa elektromagnetik ahaan loogu soo jiiday qaybta shaqada. Xawaaraha iyo saxsanaanta
alxanka induction wuxuu ka dhigayaa mid ku habboon alxanka geesaha ee tuubooyinka iyo tuubooyinka. Nidaamkan, tuubooyinku waxay ku gudbaan xarkaha soo-kicinta xawaare sare. Markay sidaas yeelaan, geesahooda ayaa kululaanaya ka dibna la isku wada tuujinayaa si loo sameeyo tollayn alwaax dherer ah. Alxanka Induction wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay wax soo saar mug weyn leh. Walxaha indha-indheynta ayaa sidoo kale lagu dhejin karaa madaxyada xiriirka, iyaga oo u rogaya
Nidaamyada alxanka laba-geesoodka ah.
Qalabaynta alwaaxda dhaadheer ee otomaatiga ah waa mid la isku halleyn karo, hab-socod sare. Isticmaalka tamarta yar iyo waxtarka sare ee nidaamka alxanka DAWEI Induction wuxuu yareeyaa kharashka. Awooddooda xakamaynta iyo soo noqoshada ayaa yareynaya qashinka. Nidaamyadeenu sidoo kale waa dabacsan yihiin-iswaafajinta culeyska otomaatigga ah waxay xaqiijineysaa awoodda wax soo saar buuxda oo ku baahsan cabirro balaaran oo balaaran. Raadkooda yarna waxay ka dhigayaan kuwo si fudud ugu milmi kara ama dib ugu noqon kara khadadka wax soo saarka.
Alxanka Induction waxaa loo isticmaalaa warshadaha tuubbada iyo tuubbada ee alxanka dhaadheer ee birta birlabta ah (magnetic iyo non-magnetic), aluminium, kaarboon-yar iyo xoog-yare bir ah (HSLA) iyo waxyaabo kale oo badan oo tabinta ah
Categories FAQ Tags alxanka badan ee alxanka, induction induction, geedi socodka alwalida induction, alaarmida badan ee alaarmiga, alxanka, tuubbada tuubbada, tuubada alxanka
Waa maxay xidhista induction?
Isku-xirnaanta Induction waxay isticmaashaa kuleylka kuleylka si loo daaweeyo dhejiska isku dhejinta. Soo-saariddu waa habka ugu muhiimsan ee lagu daaweeyo xabagta iyo dahaadhka loogu talagalay qaybaha baabuurta sida albaabbada, daboolka, fendarrada, muraayadaha gadaal iyo birlabta. Soo-saariddu waxay kaloo daaweysaa koolada isku-dhafan-birta iyo kaarboon-kaarboonka-kaarboonka isku-dhafan Waxaa jira laba nooc oo isku xidhka baabuurta ah:
kaas oo kululeeya qaybo yar oo ka mid ah maaddooyinka lagu biiriyo; giraan giraan buuxda, oo kululeysa kala-goysyada oo dhammaystiran.
DAWEI Nidaamyada isku xidhka booska Induction Induction waxay xaqiijinayaan gashiga tamarta saxda ah ee guddi kasta. Aagagga kuleylka yar yar ay saameeyeen waxay yareeyaan wadarta dheeraynta darfaha. Qabsashada looma baahna marka la isku xidhayo biraha birta ah, taas oo yaraynaysa buuqa iyo qallooca. Guddi kasta si elektiroonig ah ayaa loola socdaa si loo hubiyo in leexashada ku-soo-galka tamarta ay ku jirto dulqaadasho. Iyada oo isku xidhka giraan buuxda, hal-cabbir ah-
dhammaan gariirku wuxuu yareeyaa baahida loo qabo xirmooyinka loo yaqaan 'spare coils'.
Soo-saariddu waa habka doorbidista isku-xirnaanta ee warshadaha baabuurta. Si ballaaran ayaa loo isticmaalay in lagu xiro birta iyo aluminiumka birta, soo-saarista ayaa si sii kordheysa loogu shaqeynayaa si loogu xiro qalabka cusub ee miisaanka culus iyo walxaha fiber-ka. Soo-kicinta waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro xargaha qalooca, kabaha bareega iyo birlabta warshadaha korantada.
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa hagayaasha, biraha, armaajo iyo looxyada qaybta alaabada cad.
DAWEI Induction waa xirfadle ku takhasusay daaweynta daaweynta. Xaqiiqdii, waxaan ikhtiraacnay bogsiinta booska induction.
Qalabka aan soo gaarsiineyno wuxuu udhaxeeyaa shakhsiyaadka nidaamka shaqsiyadeed sida ilaha korontada iyo gariiradda, si loo dhameystiro loona dhameystiro xalka furaha.
Categories FAQ Tags isku xidhka, kuleylka kuleylka kulaylka badan, xirashada induction, kuleyliyaha dhajinta induction, geedi socodka xidhitaanka induction, Nidaamka dhajinta RF
Dareemida kuleylka ayaa ah geedi socodka kuleylka ee hagaajiya astaamaha farsamada sida adkaanta iyo ductility
ee goobo shaqo oo horayba loo adkeeyay.
Faa'iidada ugu weyn ee kuleylka kuleylka kuleylka ayaa ah xawaare. Kala-saaridu waxay xanaaqi kartaa shaqooyinka daqiiqadaha, mararka qaarkood xitaa ilbidhiqsiyo. Foornooyinka sida caadiga ah waxay qaataan saacado. Iyo sida kuleylka indha-indheynta ay ugu habboon tahay isdhexgalka qadka, waxay yareynaysaa tirada qaybaha ka kooban geedi socodka. Dabeecadda qabatinka ayaa sahlaysa xakamaynta tayada shaqooyinka shaqsiyadeed. Xarumaha dabeecadaha isdhexgalka ah ee isku dhafan ayaa sidoo kale badbaadiya meel qiimo leh.
Dabeecadda soo-saarista ayaa si ballaaran loogu shaqaaleeyaa warshadaha baabuurta si loo xakameeyo qaybaha dusha sare ee adag sida fallaadhaha, baararka iyo kala-goysyada. Nidaamka waxaa sidoo kale loo adeegsadaa warshadaha tuubbada iyo tuubbada si loo xakameeyo shaqooyinka culus ee culus. Dabeecadda ku-shubista marmarka qaarkood waxaa lagu sameeyaa saldhigga adkaanta, mararka qaarkoodna mid ama dhowr saldhig oo xanaaq badan.
Nidaamyada HardLine oo dhameystiran ayaa ku habboon codsiyo badan oo xanaaqa. Faa'iidada ugu weyn ee nidaamyada noocan oo kale ah ayaa ah in qallafsanaanta iyo xanaaqa ay ku shaqeeyaan hal mashiin. Tani waxay ku bixisaa waqti muhiim ah iyo kaydinta kharashka raad yar marka la barbar dhigo teknoolojiyada kale. Foornooyinka, tusaale ahaan, hal foorno ayaa inta badan marka hore adkeysa qalabka shaqada, iyadoo leh foorno gooni ah
ka dibna loo adeegsado xanaaq. Nidaamyada kululaynta ee 'DAWEI Induction Heating Solid' oo adag ayaa sidoo kale loo adeegsadaa codsiyada xanaaqa.
Categories FAQ Tags Joogtaynta sarreeya, diirinta induction, dusha sare ee induction tempering, Daaweynta diidmada RF, dulqaad, daaweyn kululaynta kuleylka
Mabaadi'da Sedeynta & Maareynta Loo Dhigayo
Induction Brazing & Soldering Principle Brazing iyo soldering waa geedi socodka ku biirida walxaha la midka ah ama kuwa aan isku midka ahayn iyadoo la adeegsanayo qalab buuxiya wax ku habboon. Biraha la buuxiyo waxaa ka mid ah macdanta "lead", daasadda, naxaasta, qalinka, nikkel iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay. Kaliya alloy ayaa dhalaaliya oo adkeeya inta lagu gudajiro howlahaan si loogu biiro qalabka aasaasiga ah ee shaqada. Birta buuxinta ayaa la jiiday… Akhri wax dheeraad ah
Categories FAQ Tags aasaasida kuleylka kuleylka, xayawaanka ciriiriga ah, aragtida budhcad-badeedka, mabaadi'da dhejinta induction